Madaxweyne Deni oo magacaabay Xubnaha u metelaya Puntland Guddiga Farsamada - Jowhar Somali Leader
Home News Madaxweyne Deni oo magacaabay Xubnaha u metelaya Puntland Guddiga Farsamada
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa magacaabay labo xubnood oo u metelaya maamulka Puntland guddiga farsamo ee dhowaan ay madaxda dowlada federalka iyo maamul goboleedyada ku heshiiyeen inay ka soo shaqeeyaan hannaanka doorashada dalka.
Qoraal uu soo saaray Madaxweyne Deni ayaa ugu magacaabay labadan xubnood Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Agaasime ku xigeenka madaxtooyada Puntland.
Halkan hoose ka aqriso qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Puntland.
Dhuusamareeb: 24 Luulyo 2020 : Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni isagoo ka duulaya war-murtiyeedkii kasoo baxay Shirkii Madaxda Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo Dowladdaha xubnaha ka ah kuna qabsoomay magaaladda Dhuusamareeb ee Caasimadda Dowladda Galmudug, 22 Luulyo, 2020.
Shirkaas oo nuxurkiisa ay ka mid aheyd in la magacaabo guddi farsamo oo ka kala socda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha xubnaha ka ah, guddigaas oo kasoo baaraandagi doona hannaanka iyo habsami u socodka Doorashooyinka Dalka. Sidaasi darteed, Madaxweynaha Puntland wuxuu magacaabay xubnaha ku matali doona guddigaasi Maamulka Puntland.
*Xeerkan waxaa uu dhaqan gelaya marka uu Madaxweynuhu saxiixo, wuuna saxiixay.